ဝါခေါင်မိုး: မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာ ၀မ်းမြောက်စရာ…
Posted by မအိမ်သူ at 6:30 PM
ဘ၀ရဲ့ခရီးစဉ်တွေကို မိတ်ကောင်းဆွေကေင်းတွေနဲ့သာ သွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ငရဲပြည်အတွက်ပါ လက်မှတ်ကြိုဖြတ်ထားလိုက်ချင်ပါရဲ့ မအိမ်သူရေ...ဒါပေမယ့်လည်း မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာကလည်း ရွှေထက်တောင် ရှားလွန်းနေပြန်တော့လည်း...
မအိမ်သူ ဘာသာပြန်ထားတာလေးတွေ ဆီလျော်သလို လှလည်းလှပါတယ်...ကျေးဇူးပါ...
ကြည်လင်မှု ၊ သန့်ရှင်းမှု
အေးချမ်းမှု ၊ တောက်ပမှု
August 22, 2011 4:44 AM
I love every words of your translation. They rhyme like poems. Thank you for sharing and your effort in this post.
ဘ၀နေ၀င်ချိန်နီးလေ...... မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ အရေးပါလေ ပဲ ဆိုတာ အရမ်းကို ကြိုက်ပါတယ်။
တတ်နိုင်သလောက် ဖတ်သွားပါတယ် ကျေးဇူးပါဗျာ။
မိတ်ဆွေ စစ် တွေ ကို တန်ဘိုးထားတယ် ညီမ ရေ မိတ်ဆွေစစ် ဆိုတာ ဘဝ မှာ လက်ချိုးရေတွက် လို့ရပါတယ်
သူ့အတွက် ကိုယ် က မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်အောင် အရင်ကျိုးစားပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်.. မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ တန်ဖိုးကြီးလှတယ်.. မအိမ်သူရေ...
ကျနော် မိတ်ဆွေစစ်က စာသားလေးတွေ ကူးသွားပါတယ် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် အစ်မရေ့ ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်းတွေကို သိပ်တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူမို့ပါ ။
မိတ်ဆွေကောင်းအတွက် စာကောင်းတွေကို ဖတ်ယူမှတ်သားသွားပါတယ်အမ...။
သတိရနေမိတယ်၊ မိတ်ဆွေကောင်း သူငယ်ချင်းကောင်း
ဆိုတာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ စိန်တွေရွှေတွေထက်တန်ဖိုး
ရှိတယ်တဲ့ jas လဲခုမှသိရတဲ့ ကဗျာရေးဖော်
သြဂုတ်လ31ရက်နေ့အတွက်ရေးတာပဲဖြစ်မယ်၊ သိပ်ကောင်းတာပဲ အစ်မရေ :)
“ဘေးနားမှာ မိတ်ဆွေစစ်သာ ပါမယ်ဆိုရင် ဘယ်ခရီး ကမှ မရှည်လျားပါဘူး..” ဆိုတဲ့ ပြင်သစ် စကားပုံလေး ကိုလည်း သတိရလိုက်မိတယ်..၊ ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်း ရတဲ့ လမ်းတွေထက်မှာ မိတ်ဆွေစစ်တွေ လိုအပ်တာ အမှန်ပါပဲ...၊ မအိမ်သူရဲ့ ဘာသာပြန်က ချောချောမွေ့မွေ့ မို့ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်...။
စာကောင်းပေကောင်းလေးတွေ ယူသွားတယ် မအိမ်သူရေ။ ကျေးဇူးနော်။
သိပ်ကောင်းတဲ့ စာလေးတွေပါပဲ အစ်မရေ....ကိုးကားဖို့
အရေတွက် နည်းပါစေ။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေစစ် နဲနဲပဲ ရှိရုံနဲ့ လုံလောက်တယ် မဟုတ်လား။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း မင်တဲ့ ကျနော်ကတော့ သူငယ်ချင်း စစ်စစ်တွေ ရဖို့ အမြဲမျှော်လင့်တာပဲ။
God chooses our relatives, we choose our friends. ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုအဓိပ္ပါယ်ပြန်ထားတာဖတ်မိပြီးလင်းကနဲတစ်ချက်
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဘာသာပြန်ချက်ဗျာ။ အရမ်းလှပါတယ်။ လေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ပ မအိမ်သူပြောသလိုပါပဲ မိတ်ဆွေဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကပေးတဲ့ ဆုလာဒ်ဖြစ်သလို သဘာဝကပေးတဲ့ လက်ဆောင်မွန်ပါပဲ။ သဘောကျစွာ ဖတ်သွားပါတယ်...
စာရေးကောင်းတဲ့ မမနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရသူတွေကလည်း ဝမ်းသာကြမှာပါး)
ကျောလိုရာဒိုသှား တောလား - ၁ - စကျတငျဘာ ၁၃ သွောကာနညေ့နေ ၃ နာရီ ရုံးကနေ ဂကျြဆငျဟိုကျကို မိနဈ ၅၀ လောကျ ရထားစီးရတယျ။ ဂကျြဆငျဟိုကျကနေ လာဂှာရီရားလေဆိပျဆီ ဘတျဈကားစီးဖို့ဘတျဈကားလကျမှတျ ဝ...
ကဗြာလူ..... - ခဈြသူ.... ရိုးရိုးလေးပါပဲ ကဗြာတှဖေနျဆငျးဖို့ ငါ့ရငျကိုရောကျခဲ့သူ ငါ့ခံစားခကျြတှကေို စကားလုံးအဖွဈပွောငျးလဲသူ ငါ့ပြျောရှငျမှုတှကေို စကားလုံးအဖွဈပွောင...
အဆုံးတဈနအေ့တှကျ - *ဘယျသူက ဘယျသူ့အတှကျ* ဖွဈတညျခဲ့တာလဲကှယျ တဈနသှေ့ားရမဲ့ လမျးတူတူ ဘိနျးစားခငျြးတူတူ တဈမူးပိုမရှူခငျြပါနဲ့ ..... *လောကကို ဆေးရောငျခွယျ* စိတျရဲ့အလှနဲ့ တနျဆာဆ...
If You Think You Get , Then Read This - Implications of Protection FromaDebt Lawsuit An individual will get adversely recorded on the off chance that they do not pay their advances on time cons...